सेन्ट माइकल प्रेम को लागी प्रधान दूत को लागी प्रार्थना। दुश्मन र सुरक्षा।
प्रधान माइकल प्रधान दूतलाई प्रार्थना प्रवेश गर्नु हो संसार बाइबलका कथाहरूमा देखा पर्ने यो प्रधान दूत स्वर्गबाट ​​एक योद्धाको रूपमा प्रतिनिधित्व गरिएको छ र हाम्रो आध्यात्मिक लडाईहरू लड्न पृथ्वीमा पठाइएकोले यसले आध्यात्मिक युद्धले भरिपूर्ण छ।
हामीलाई तपाईको सहयोगको जुनसुकै बेला पनि सहयोगको लागि सोध्न सक्छौं, उहाँ शारीरिक रूपले लड्न नसक्ने लडाईहरू आध्यात्मिक तवरमा लड्न हामीलाई मद्दत गर्न सधैं इच्छुक हुनुहुन्छ।
1 सेन्ट माइकललाई प्रधान दूत प्रधान! माइकल को प्रधान दूत को हुनुहुन्छ?
1.1 प्रेमको लागि प्रधान दूत मिशेललाई प्रार्थना
1.2 दुश्मनहरूका विरुद्ध प्रधान माइकलको प्रधान दूतको प्रार्थना
1.3 सुरक्षाको लागि प्रार्थना
1.4 जागिर पाउन प्रार्थना
सेन्ट माइकललाई प्रधान दूत प्रधान! माइकल को प्रधान दूत को हुनुहुन्छ?
सान मिगुएल को हो भनेर वर्णन गर्न, हामी यो शुरू गरेर भन्न सक्छौं कि उसको नामको अर्थ परमेश्वर को हो भन्ने अर्थ हुन्छ।
एक हो मुख्य प्रधान दूतहरूको उनको नाम उल्लेख गरिएको छ पवित्र शास्त्रहरु प्रधान दूत राफेल र गेब्रियल पछि। स्वर्गीय मिलिशियाका कप्तान र अन्य स्वर्गदूतहरूले उनको आदेश पालन गर्छन्।
इसाई विश्वासको सुरूदेखि नै सेन्ट माइकललाई योद्धाको रूपमा हेरिन्थ्यो जसले आफ्नो दुष्ट आगोको तरवारले दुष्ट शत्रु शैतान र त्यसका प्रेतहरू पराजित गर्न सफल भयो।
उहाँ एक अभिभावक र विश्वासी संरक्षक हुनुहुन्छ यसले हाम्रो जीवन, परिवार र सम्पत्तीलाई राम्रोसँग राख्नेछ।
प्रेमको लागि प्रधान दूत मिशेललाई प्रार्थना
ईश्वर तपाईंलाई बचाउनुहुन्छ, प्रधान दूत सेन्ट माइकल विजयी, धन्यका र परम महिमाशाली दूत र यसैले विशेष गरी उहाँबाट अनुमोदन पाएको आज मेरो पीडामा म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु, म विश्वासको साथ बोलाउँछु, र म तपाईंको लाभकारी सहयोग र सुरक्षाको लागि अनुरोध गर्दछु;
म तपाईलाई बिगार्दछु कि सबै नराम्रो उर्जालाई जसले मलाई असर गरिरहेको छ, नष्ट गर्नुहोस्, मलाई तपाईको दिव्य ज्योतिले ढाक्नुहोस् र तपाईको अविश्वसनीय रूपमा प्रभावकारी र द्रुत शक्तिले मेरा चाहनाहरू पूरा भएको हेर्नको लागि मध्यस्थ गर्नुहोस्।
स्वर्गका ढोकाका प्रधान दूत माइकल कस्टोडियन, तपाईले सँधै मलाई दिनुहुने सेवाको लागि मेरो नम्र आभार प्रदान गर्दछु र मलाई थाहा छ कि तपाइँले मलाई मेरो प्रेम समस्याहरूमा मद्दत गर्नुहुनेछ:
(भन्नुहोस् कि तपाई के प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ)
ओह, प्रधान दूत माइकल, आकाशी राजकुमार, मेरो अभिभावक परी! म नम्र भएर तपाईलाई मेरो आवाज सुन्न आग्रह गर्दछु र मेरो हृदयमा मिठो शान्ति दिन्छु जुन म चाहन्छु।
म शान्तसंग बस्न सक्दिन र मेरो आत्मा अचेत छ।
म केवल मेरो रोगको उपचार गर्न सक्छु र मेरो पीडालाई कम गर्न सक्छु प्रेमको साथ:
ओह, प्रधान दूत माइकल, आकाशी राजकुमार, मेरो अभिभावक परी, मेरो आवाज सुन्नुहोस्! पिताको नाममा, पुत्रको नाममा र पवित्र आत्माको नाममा।
Connoisseur विश्वासी प्रेम र अटुट प्रेमको, ईश्वरीय प्रेमले पूर्ण हो कि स्वर्गीय पिता आफैले आफैंको उपस्थितिको साथ खारेज गर्नुभयो।
हाम्रो जीवनमा यति धेरै चिन्ताहरू ल्याउने हृदय मुद्दाहरूको लागि हामीलाई सहयोग गर्न उहाँसँग अरू कोही छैन।
कि त प्रेम प्राप्त गर्न, सडक सडक बनाउन, सम्बन्ध सुधार गर्न वा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्न।
हामी लिने सही मार्गको स्पष्टीकरण गरौं हामीले लिनु पर्दछ र हामीलाई सँधै मद्दत गर्नुपर्दछ।
दुश्मनहरूका विरुद्ध प्रधान माइकलको प्रधान दूतको प्रार्थना
शानदार सान मिगुएल अर्कानेलतिमी जो दुष्टता र घृणा को दूतहरु को विरुद्ध तीलागी लडाई लडे;
तपाईं शत्रु र दुष्टको मूर्खताबाट विजयी हुनुभयो;
तपाईं जो अन्धकारको राजकुमारको दुष्ट जालबाट विजयी हुनुभयो, सम्पूर्ण मानवजातिलाई आफ्नो पञ्जाबाट जोगाउँदै, म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु कि मलाई दुष्टता चाहने सबैबाट तपाईंको सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस् र शैतानको हतियारहरू मेरो विरुद्धमा नजाओस्।
मौन दुश्मनहरू, खराबीको ख्याल राख्नुहोस्, र मलाई निष्पक्ष हुन सहयोग गर्नुहोस् ताकि मेरो मनोवृत्तिको साथ, कसैले पनि अपमान वा रीसेट गर्दैन, र यसको विपरितमा, पुरुषहरूसँग शान्तिमा रहनको लागि भगवानमा मर्यादाका साथ आउँदछ।
मलाई सबै शत्रु र खराबी विरुद्ध विजय दिनुहोस्।
कथाले ऊ कसरी गयो भनेर बताउँछ दुश्मनलाई हराउनुहोस् जब सम्म उनीहरू आकाशबाट फ्याँकदैनन्.
La बाइबल उहाँ उसलाई एक शक्तिशाली योद्धाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ जसलाई हाम्रो आध्यात्मिक र शारीरिक लडाईहरू जहिले पनि लड्न मद्दत गर्न भरोसा गर्न सकिन्छ।
धेरै चोटि झगडा वा असुविधाहरू हाम्रो जीवनमा स्थिर हुने भएकोले शत्रुहरू चिन्ताको विषय बनेका छन।
स्वर्गमा हाम्रो सहयोगीको रूपमा आउनु हाम्रो निम्ति ठूलो महत्त्वको छ किनकि आत्मिक लडाईँ गर्नु भनेको हामीलाई दुखित पार्ने शत्रुहरूसँग मुद्दा चलाउनु भन्दा उत्तम हो।
हे गौरवशाली सेन्ट माइकल, प्रधान दूत, राजकुमार र स्वर्गीय सेनाहरूका नेता,
कस्टोडियन र आत्माको रक्षक, चर्च को संरक्षक, विजेता, आतंक र विद्रोही नरक आत्माहरुको आतंक।
हामी नम्र भएर बिन्ती गर्दछौं, हामी सबै विश्वासको साथ जसलाई हामी भरोसा गर्छौं सबै दुष्टबाट छुटकारा दिन योग्यको छौं;
तपाईंको अनुग्रहले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ, तपाईंको बलले हामीलाई बचाउनेछ, र त्यो तपाईंको अतुलनीय सुरक्षाको माध्यमबाट हामी परमेश्वरको सेवामा अझ बढी बढ्न सक्दछौं;
तपाईंको सद्गुणले हामीलाई हाम्रो जीवनको हरेक दिन प्रयास गर्न सक्छ, विशेष गरी को ट्रान्स मा मृत्यु, तसर्थ, नरक अजि .्गर र यसको सबै पासोको आफ्नो शक्ति द्वारा रक्षा, जब हामी यो संसार छोड्छौं हामी तपाईंद्वारा प्रकट हुनेछौं, कुनै दोष बिना, ईश्वरीय महिमाको अगाडि हामी प्रस्तुत गर्नेछौं।
यदि तपाईं सुरक्षा चाहानुहुन्छ भने, यो सही सेन्ट माइकल प्रधान देवदूत प्रार्थना हो।
एक वफादार नोकर जसले पृथ्वीमा रहेका परमेश्वरका बच्चाहरूलाई आफ्नो सुरक्षा र देखभाल गर्दछ र जसलाई समयमै हेरचाह गर्न विगतमा पठाइएको थियो, हामीसँग फेरि त्यसो गर्नेछौं।
शक्तिशाली अभिभावक जसले हाम्रो परिवार र भौतिक सामानहरू सुरक्षित राख्छ।
उठाउनुहोस् una oración दैनिक हामीलाई विश्वास छ कि कसैले हाम्रो सबै दैनिक जीवनमा सँधै अव्यक्त सबै खराबी र जोखिमबाट हामीलाई हेरचाह गरिरहेको छ।
जागिर पाउन प्रार्थना
ग्रेट सान मिगुएल प्रधान दूत, कि तपाई सबैभन्दा उच्चको छेउमा बसिरहनु भएको छ।
यस दिन म तपाईलाई बिन्ती गर्न प्रोस्टेट आएको छु कि काम कहिल्यै नगुमाउनुहोस्।
म बाहेक धेरै व्यक्ति यसमा निर्भर छन्। म केवल आज, भोलि र सधैं मेरो आशीर्वाद को लागी तपाईको आशिष् मा भरोसा गर्न को लागी आशा गर्दछु मेरो कामको फल फलाउन र अधिकतम परिणामको साथ। मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि तपाईंले हराएको आत्मालाई शुद्धीबाट मुक्त गर्नुभयो।
म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु मेरो कामलाई फलदायी बनाउँनुहोस् जस्तो गरी हालसम्म यो भएको छ।
म रोजगारका स्रोतहरूमा मद्दत गर्न चाहान्छु, किनकि जब म मेरा कामदारहरूले र म दुबै कामको आनन्द लिन्छु भन्ने देख्छु तब म आफैं सन्तुष्ट हुन्छु।
प्रधान माइकल प्रधान दूत, हाम्रो लागि प्रार्थना र यी शब्दहरु सुन्नुहोस्।
प्रार्थना गर्नुहोस् प्रधान माइकल द प्रधान प्रधानको प्रार्थना धेरै विश्वास संग काम प्राप्त गर्न।
उनको स्वर्गदूतको सेवकाई पनि कम पक्षमा परेकाहरूको मद्दतमा केन्द्रित छ, यसैले सेन्ट माइकललाई प्रार्थना जागिर पाउन यो एक शक्तिशाली हतियार हुन्छ जुन हामीले यो कामको अन्तर्वार्ता गर्नु अघि हामीलाई मद्दत गर्न र अरूहरू समक्ष अनुग्रह दिन प्रयोग गर्न सक्छौं।
विश्वव्यापी क्याथोलिक क्रिश्चियन चर्चले हामीलाई विश्वासको साथ यस प्रधान दूतको भक्ति गर्न आमन्त्रित गर्छ, हामीलाई विश्वास दिलाउँछ कि उसले हामीलाई योग्यको जागिर पाउन, कुनै खतराबाट आफूलाई जोगाउन, हामीलाई सबै खराबीहरूबाट जोगाउन र हामीलाई हेर्ने काममा मदत गर्न सक्छ।
हामी कुनै पनि कारणको लागि प्रार्थना गर्न सक्दैनौं यदि हामी यो हृदयबाट विश्वास गर्दैनौं जुन स्वर्गबाट ​​हामीले चाहिने आश्चर्यकर्म हामीलाई दिइनेछ।
हो, त्यहाँ भन्दा अधिक स्पष्ट र सीधा कुनै उत्तर छैन।
हामी प्रार्थनाको बारेमा परमेश्वरको वचनले भनेको कुरामा हामी विश्वासका साथ विश्वास गर्छौं र यसैले हामी विश्वास गर्छौं कि यदि हामी सेन्ट माइकललाई प्रार्थना चढायौं भने ऊ हाम्रो विगतमा आउनेछ जस्तो उसले विगतमा गरेको थियो।
हामीले प्रार्थना गर्दा विश्वास गर्नुपर्दछ प्रधान माइकल प्रधान दूतलाई शक्तिशाली प्रार्थना.
सेन्ट मार्क, शक्तिशाली प्रार्थना
सेन्ट चार्बलको लागि शक्तिशाली प्रार्थना